Ọmụmụ CDC dị ịtụnanya ka ewepụtara na ịdị irè nke ọgwụ COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Ọmụmụ CDC dị ịtụnanya ka ewepụtara na ịdị irè nke ọgwụ COVID-19
Ihe omuma a gosiputara na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa nwere ike inye ọkwa mgbochi dị elu, siri ike na nke na-agbanwe agbanwe iji chebe ndị mmadụ n'ụlọ ọgwụ maka COVID-19 karịa ọrịa naanị opekata mpe ọnwa isii.
taa, CDC bipụtara sayensị ọhụrụ na-emesi ike na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa bụ nchebe kachasị mma megide COVID-19. N'ime MMWR ọhụrụ na-enyocha ihe karịrị mmadụ 7,000 n'ofe steeti 9 nọ n'ụlọ ọgwụ nwere ọrịa COVID-dị ka, CDC chọpụtara na ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi ma nwee ọrịa na-adịbeghị anya nwere ike ịnwe COVID-5 ugboro 19 karịa ndị agbachara ọgwụ mgbochi na nso nso a. ma enwebeghị ọrịa mbụ.
“Ugbu a, anyị nwere ihe akaebe ọzọ na-ekwughachi mkpa ọgwụ mgbochi COVID-19 dị, ọbụlagodi na ị bu ụzọ bute ọrịa. Ọmụmụ ihe a na-agbakwụnye ihe ndị ọzọ na ahụ nke ihe ọmụma na-egosipụta nchebe nke ọgwụ mgbochi megide ọrịa siri ike sitere na COVID-19. Ụzọ kachasị mma iji kwụsị COVID-19, gụnyere mpụta nke ụdị dị iche iche, bụ ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 zuru ebe niile yana omume mgbochi ọrịa dịka iyi ihe mkpuchi, ịsa aka mgbe mgbe, ndọpụ anụ ahụ, na ịnọrọ n'ụlọ mgbe ọrịa, ” CDC Onye nduzi Dr. Rochelle P. Walensky.
Ọmụmụ ihe ahụ lere anya na data sitere na VISION Network nke gosipụtara n'etiti ndị okenye nọ n'ụlọ ọgwụ nwere mgbaàmà yiri COVID-19, ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi ọrịa butere ọrịa mbụ n'ime ọnwa 3-6 ji okpukpu 5.49 nwere ike ịnwe ụlọ nyocha nyocha COVID-19 karịa ndị zuru oke. gbara ọgwụ mgbochi mRNA (Pfizer ma ọ bụ Moderna) COVID-3 n'ime ọnwa 6-19. Emere ọmụmụ ihe a n'ofe ụlọ ọgwụ 187.
Ọgwụ mgbochi COVID-19 dị mma ma dị irè. Ha na-egbochi ọrịa siri ike, ịga ụlọ ọgwụ, na ọnwụ. CDC na-aga n'ihu na-atụ aro ka onye ọ bụla dị afọ 12 na okenye gba ọgwụ mgbochi megide COVID-19.